Tombony sy fampiasana solika tena ilaina Rosemary
Rosemary dia kirihitra kely misy voninkazo tsotra manome fofona mahavariana. Raha adika amin'ny teny rosiana, ny "rosemary" dia midika hoe "ando amoron-dranomasina". Ny razambentsika koa dia nihevitra ity kirihitra ity ho mariky ny fitiavana sy ny fahamendrehana, ny fanambinana ary ny fahombiazana.
Toetran'ny menaka esory rosemary
Izy io dia misy akora ilaina be dia be, ny menaka dia manampy amin'ny aretina isan-karazany: hemorrhoids, lalan-drà, lalan-drà, lalan-drà malemy, aretin-kozatra, tsy fahitan-tory, mony, olan'ny hoditra menaka.
Ny menaka manadio Rosemary dia manatsara ny fihainoana sy ny fofona ary manampy amin'ny fitazonana ny fifandanjan'ny rano amin'ny alàlan'ny fanesorana ny hamandoana be loatra amin'ny vatana.
Fampiasana menaka manitra rosemary
Ity menaka ity dia manana fahaiza-manao miavaka amin'ny famoahana ireo épermermis. Izany no mahatonga ny orinasan-tarehy cosmetology lafo vidy malaza hampiasa azy io amin'ny fototry ny vokatra.
Izy io dia misy fiatraikany mahasoa amin'ny fanasitranana amin'ny hoditra. Afangaro amin'ny menaka amandy 8 sotrokely miaraka amin'ny menaka amande XNUMX eran-eran-eran-eran-tsiranoka ary afangaro amin'ny faritra misy olana isan'andro ny diloilo XNUMX. Tsy hisy soritry ny marika mihinjitra.
Omena tena ilaina ny karazana verbenon dia misy fiatraikany tsara amin'ny hoditra maina sy manify amin'ny tarehy. Ny crème, ny sarontava ary ny fanosotra mifototra amin'izany dia manatsara ny toe-pahasalaman'ny hoditra, manampy amin'ny fanafainganana ny fanasitranana ny takaitra sy ny fanesorana ireo pentina taona.
Ny menaka Rosemary dia fitsaboana tena tsara ho an'ny volo malalaka miaraka amin'ny tendrony misaraka. Izay vola mifototra amin'ny menaka toy izany dia manome ny fanampiana rehetra amin'ny fitsaboana ny sola aloha.
Ny karazan-pandroana rehetra miaraka amin'ny menaka esory rosemary dia tena malaza, izay manana fanasitranana amin'ny ankapobeny, ary mandaitra indrindra amin'ny fanaintainana amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana.
Ny fifangaroana fanorana isan-karazany dia novokarina, izay tsy ny menaka rosemary ihany, fa ny menaka rosehip sy apricot, menaka ary kakaô ihany koa.
Ity menaka ity koa dia mampiroborobo ny fanasitranana may. Mba hanaovana izany dia mila manamboatra compresse manokana ianao: menaka 6 nilatsaka dia tsy maintsy araraka ao anaty fitoeran-drano iray misy rano mafana, avy eo lamba malemy atsona ao anaty rano toy izany no tsy maintsy apetaka amin'ilay faritra marary.
Ny menaka Rosemary dia mandaitra amin'ny ratra ara-panatanjahantena, ary koa raha sendra reraka ny maso amin'ireo olona miasa tontolo andro amin'ny solosaina.
Ny hafanana amin'ny alokaloka kely amin'ity menaka ity dia manampy amin'ny fifantohana alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra matotra amin'ny toe-javatra iainana rehetra.
Ny toetra ilaina toy izany dia fanafody manerantany amin'ny fotoana rehetra, izay tsy maintsy tazonina ao an-trano ary afaka mampiasa azy tsara.
Menaka manitra Rosemary ho an'ny volo
Ny kalitao tsara iray hafa an'io menaka mahafinaritra io dia ny fiatraikany mahasoa amin'ny volo sy ny hodi-doha. Izy io dia manala sy misoroka ny dandruff, mampiroborobo ny volo, mampiato ny fihenan'ny volo, ary na dia ny volon-doha aza.
Misy karazan-tsakafo marobe momba ny sarontava volo sy hodi-doha. Raha malemy ny volonao ary mila manatanjaka sy mamelombelona dia manaova sarontava: afangaroy isaky ny basil, dipoavatra mainty, rosemary ary menaka ylang-ylang 1 latsaka. Manisy sira kely sy yolka 2 amin'ilay fangaro. Ataovy mandritra ny 2 minitra ilay sarontava. Azonao atao koa ny mampiasa an'io fangaro io fa tsy shampoo - misy vokany fanadiovana koa io.
Raha mbola vaovao ianao amin'ny fampiasana menaka esansiela dia tokony hanomboka amin'ireto manaraka ireto ianao: Alohan'ny handrahoana azy dia apetaho menaka esory rosemary iray indray mitete eo amin'ny tohotra hazo. Ny fanosehana toy izao dia tsy hanamafy ny volonao fotsiny, fa hanampy anao ho mahonon-tena sy hadio ny sainao koa.
Ary raha tsy te hanana volo tsara tarehy fotsiny ianao, fa manana endrika maneho hevitra ihany koa - ampiasao vokatra fitomboan'ny volomaso ary ho tsara tarehy ny masonao!
Ahoana ny fikotrohana vovo-tsakafo ho an'ny volo?
Ny fanafody fananana ny rosemary sy ny contraindications
Jasmine, menaka ilaina: fananana, fampiharana, hevitra
Menaka Rosemary: fampiharana, hevitra
Menaka ilaina amin'ny kininina: fananana sy fampiasana
52 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,441.